Ngubani ojonga kwiintengiso zeBanner | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 25, 2013 Douglas Karr
Andiphikisani nayo iintengiso zebhanki, Kodwa ndiyaphikisana nokungabinayo intengiso ebhengezwa enikezela umnxeba osishukumisayo kwisenzo (i-CTA) ecaleni komxholo ofanelekileyo onikezelwe kubaphulaphuli abafanelekileyo. Amaxesha amaninzi, ndityelela iwebhusayithi kwaye ndibona intengiso yesibhengezo engenanto yakwenza nomxholo ojikeleze yona. A Isibhengezo sentengiso siqhuba kakuhle xa kuyi-CTA kwindawo ekuya kuyo umntu ofike kwisiza kwaye unethemba lokuzibandakanya ngakumbi.
Izibhengezo zeBanner zaqala ukubonakala kwiwebhu ngo-1994 kwaye ukusukela ngoko ziye zasetyenziswa kakhulu kwi-Intanethi. Zenziwe ukuba zibambe amehlo kwaye zinomdla ukuze zenze umdla kwiindwendwe zokucofa kwishishini labo. Kodwa, ukuveliswa kwabo ngobuninzi kunye nokusetyenziswa gwenxa kwabo kubangele ukuba ababukeli bangathandabuzi kwaye bangaphenduli kubo. Emva kweminyaka esi-8, ngaba abantu basawela kule ntengiso inomdla?
Le infographic evela kuPapasho lweNtengiso, Ngubani ojonga kwiintengiso zeBanner, inika umbono othile kulo mbuzo.
Uphando lwabasebenzisi bakaGoogle kuPhando lweNtengiso kunye nokwoneliseka kweWebhusayithi